लिचीमा भएको रसायनले ४७ बालबालिकाको मृत्यु
एजेन्सी । उत्तरी भारतमा धेरै लिची खाएका कारण पछिल्लो तीन सातामा ४७ जना बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। बिहारका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएअनुसार सुक्ष्म इन्सेफ्लाइटिस सिन्ड्रोमका कारण ती बालबालिकाको ज्यान गएको हो। स्वास्थ्य अधिकारीहरूका..
काठमाडौं । सरकारले १२ पास नगरी विदेशमा पढ्न जान नदिने भएको छ। एसईई उत्तिर्ण गरेका विद्यार्थी बंगलादेश, अष्ट्रेलिया, जापान, अमेरिकालगायत देशमा पढ्न जान स्वीकृति (नो अब्जेक्सन लेटर) लिने गरेपछि शिक्षा,..
काठमाडौं । शैक्षिक क्षेत्रको अन्योलतालाई न्यूनीकरण गर्न भन्दै सिन्धुपाल्चोकमा सरकारी विद्यालयका शिक्षकका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमा नै पढाउनुपर्ने नियम लागू हुने भएको छ । जिल्ला शिक्षा समिति, स्थानीय तहका प्रमुख,..
अब ज्ञान तथा शिक्षाका लागि ल्याईने किताबमा पनि १० प्रतिशत भन्सार शुल्क
काठमाडौं । सरकारले पत्रिका र किताबमा भन्सार शुल्क लगाएको छ। विदेशमा छापिएर आउने त्यस्ता किताब, पत्रिका तथा ब्रोसरमा अब १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्नेछ। आगामी वर्षको बजेटसँगै आएको आर्थिक विधेयकमार्फत् अर्थ..
किन भयो ? प्रधानमन्त्रीलाई विश्वविद्यालयको कुलपतिबाट हटाउन प्रस्ताव
काठमाडौं । विश्वविद्यालयहरूमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने वर्तमान व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न सुझाव आएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा कुलपतिको व्यवस्था परिवर्तन गर्न सुझाएको हो। शिक्षा..
काठमाडौं। तीन दिनभित्र बढी शुल्क फिर्ता गर्न सरकारले निजी मेडिकल कलेजलाई दिएको निर्देशनको म्याद आज आइतबार सकिँदै छ । एक महिनाअघि भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न निजी मेडिकल कलेजले बेवास्ता गरेपछि..
अल्सर हुन नदिन के गर्ने ? अब यसो गर्नुहोस्
काठमाडौं । हाम्रो पेटमा अम्ल (एसिड) हुन्छ, जसले खाना पचाउन सहयोग पुर्याउँछ । तर, कहिलेकाहीँ अम्लको मात्रा बढी हुँदा ग्यास्ट्रिक हुने गर्छ । कतिपय अवस्थामा उक्त एसिडले गर्दा आमाशय र..
हुम्ला । अज्ञात रोगले हुम्लाको ताँजाकोट गाउँपालिकामा आठ जनाको मृत्यु भएको छ । सो रोगले एक दर्जनभन्दा बढी बिरामी परेका छन । एक सातासम्म फैलिएको अज्ञात रोगका कारण शुक्रबारसम्म मर्नेको सङ्ख्या..
सामुदायिक विद्यालय छाडेर संस्थागत विद्यालय जाने धेरै अभिभावक र विद्यार्थीको रोजाइमा पर्छ । केही सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर उच्च रहँदारहँदै पनि अभिभावकले संस्थागत विद्यालयमै आफ्ना बालबालिकालाई भर्ना गराउँदै आएका छन्..
काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले लगानी सम्मेलनमा सहभागीको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी विभिन्न छ अस्पताललाई तयारी अवस्थामा राखेको छ । दुईदिने सो सम्मेलन भोलिदेखि यहाँ शुरु हुँदैछ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय..
कलेज कानुनविपरीत शुल्क माग्छ, राज्य हाम्रो मर्का सुन्दैन, के गरौं !
काठमाडौं । गण्डकी मेडिकल कलेज, पोखराका ६ सय विद्यार्थी सरकारले तोकेको शुल्क मात्र लिन माग गर्दै एक महिनादेखि आन्दोलनरत छन्। कलेजमा ताला लागेको छ। पढाइ ठप्प छ। तेस्रो वर्षका विद्यार्थीको त..
कक्षा ११ को नतिजा सार्वजनिक, यसरी हेर्नुहोस नतिजा
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गत पुस महिनामा सञ्चालन भएको कक्षा ११ को ग्रेडवृद्धि परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित गरेको छ । बोर्डको सोमबार बसेको बैठकले परीक्षाफल प्रकाशित गरेको हो । परीक्षामा १..
शिक्षकले राजनीति गर्न नपाउने, निजी विद्यालय १० वर्षभित्र गैरनाफामुलक हुने
काठमाडौं । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको छ । आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष एवं शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रधानमन्त्री..
भान्टा खानुहोस् ग्याष्ट्रिकदेखि मधुमेहसम्मको औषधी हुन्छ
भान्टा विश्वभरको भान्सामा प्रयोग हुने तरकारी हो । बहुगुणी भान्टा नेपालमा पनि सहजै उपलब्ध हुन्छ । यसलाई ऐगल्पान्ट, औवरजीन, मेलोनजेन, ग्वाइना, स्कवास, गार्डेनऐग जस्ता नामले पनि चिन्ने गरिन्छ । भाण्टा..
अमेरिकामा सबभन्दा बढी शिक्षित हिन्दू रहेको सर्वेक्षणको निष्कर्ष
काठमाडौं । अमेरिकामा चार वर्षको कलेज डिग्री आर्थिक प्रगतिका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । तर धर्मका हिसाबले हेर्दा कलेजको पढाइ पूरा गर्ने विषयमा फरक फरक धर्मको अनुपात फरक फरक छ । कलेजको..
थाङ फाउण्डेसनद्धारा विद्यालयलाई बुक ब्याग हस्तान्तरण
काठमाडौं । लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिका करापूटारको श्री जनमन्दिर माध्यमिक विद्यालयलाई थाङ फाउण्डेसन नेदरल्याण्डद्धारा विशेष कार्यक्रम गरी बुक ब्याग हस्तान्तरण गरेको छ । थाङ फाउण्डेसनको तर्फबाट नेपाल प्रतिनिधि मोहन विक्रम श्रेष्ठ, सचिव..
काठमाडौं । लमजङ जिल्ला मध्यनेपाल ७ करापूटारमा रहेको कुसुमाकर माध्यमिक विद्यालयमा संचालिती कुसुम सामुदायिक पुस्तकालयमा थाङ फाउण्डेसन नेदरल्याण्ड द्धारा विविध कार्यक्रमहरु सम्पन्न गरिएका छन् । थाङको तर्फबाट नेपाल प्रतिनिधि मोहन वित्रम..
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थीले सरकारी सेवाभन्दा निजी क्षेत्रप्रति आकर्षण देखाएका छन् । त्रिविको ४४ औँ दीक्षान्त समारोहमा सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याएर विभिन्न पदक र पुरस्कार पाएकाले निजी क्षेत्रप्रति..
मिर्गौलामा उत्पन्न हुने विविध समस्यामध्ये पत्थरी पनि एउटा हो । अव्यवस्थित जीवनशैली र खानपानका कारण मिर्गौलामा पत्थरी हुने गर्छ । त्यसैले सही खानपानले पनि यस्तो पत्थरीबाट बच्न सकिन्छ । तर,..
काठमाडौं । स्नातकोत्तर तहमा प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण वा न्यूनतम बी प्लस ग्रेड ल्याएका व्यक्तिलाई मात्र माध्यमिक तहको शिक्षकमा छान्न उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले सरकारलाई सुझाएको छ। शिक्षक छनोट प्रक्रियामा कडाइ गर्न सके..
काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगमा पुनःयोग गर्नेको भीड लागेको छ । केही दिनअघि प्रकाशित माध्यामिक, निम्नमाध्यामिक र प्राथमिक तहको परीक्षाफलमा असन्तुष्टि जनाउँदै पुनःयोग गर्नेको भीड लागेको आयोगका सूचना अधिकारी रामराज..
एजेन्सी । दिनभरीको थकाइ मार्न रातभरी सुत्न आवश्यक छ । निद्रा स्वास्थका लागि अत्यावश्यक छ । १८ देखि २५ वर्ष यो उमेरका युवा युवतीहरु दिनमा ७ देखि ९ घण्टासम्म सुत्नु..
पायल्सका कारण पीडित हुनुहुन्छ ? यी हुन् बच्ने उपाय
पायल्सलाई हेमराइड्स भन्ने गरिन्छ । यस्तो समस्या भएमा मलद्वारको भित्री र बाहरी भाग र मलाशयको तल्लो भागका शिराहरू सुन्निने गर्छ । विशेषगरी, यो समस्या मानिसको जीवनशैलीसँग जोडिएको हुन्छ । मलद्वारसम्बन्धी प्रायः..
काठमाडौ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरकाभित्रका सबै सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा विद्यार्थीका लागि एकै प्रकारको पोशाक लागू गर्ने तयारी गरेको छ । महानगरको शिक्षा विभागले ‘महानगरीय शिक्षा रुपान्तरण अभियान सुधार सोच’ कार्यक्रमअन्तर्गत..
काठमाडौं । बाँसको तामा, हाम्रो रैथाने परिकार । हुन त अहिले यसको सिजन होइन । यद्यपी जाडो याममा बाँसको तामाको परिवार निकै उपयोगी हुन्छ । बाँसको तामा मानव स्वास्थ्यको लागि निकै..
प्राविधिक विषय थपिएपछि त्रिविले पायो पुनर्जीवन, यि बिषयले बढे विद्यार्थी
काठमाडौं केही वर्ष विद्यार्थीको सङ्ख्यामा कमि आएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भर्ना दर फेरि बढेको छ । त्रिविमा प्राविधिक विषय पढाइ हुन थालेपछि पुनः विद्यार्थी सङ्ख्यामा वृद्धि हुन थालेको हो । त्रिविमा अहिले..
यी १२ प्रकारका रोग लागेमा के खाने के नखाने ? हेर्नुहोस
काठमाडौं । मानिसहरु खानपानमा वेवास्ता गर्छन् जसका कारण विभिन्न रोगहरु लाग्ने गरेका छन् । स्वादका लागि मिठो खाना तर्फ आकर्षित हुँदा विभिन्न रोगहरु लाग्ने गरेका छन् । त्यसैले खानपानमा विशेष ध्यान..
अनुहारको भएको दागधब्बा अब यसरी हटाउनु होस् !
एजेन्सी । अनुहार राम्रो बनाउने चाहाना सबैको हुन्छ । र अनुहार चम्किलो र दागधब्बा रहीत बनाउन हामी धेरै मेहेनत पनि गरिरहेका हुन्छौँ । अनुहारका लागि हामी महँगा कस्मेटिकहरुको प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ..
काठमाडौं । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकको योग्यता स्नातक र स्नातकोत्तर हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको विद्यालय तथा शिक्षण संस्था संचालन ऐन..
दूध कसले नखाने ?
काठमाडौं । स्वस्थ मानिस अर्थात् हेल्दी एडल्टले भने दूध नखाँदा राम्रो हुन्छ । आफैँमा स्वस्थ व्यक्तिले दूधको प्रयोग गर्दा ओभर न्युट्रेसनको समस्या हुन सक्छ मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रोल भएका मानिसलाई दूधको..
Results 222: You are at page2of 8